Kufa munaNovember, naGuillermo Galván. Ongorora | Zvazvino Zvinyorwa
Mariola Diaz-Cano Arevalo | 25/10/2021 12:00 | Vanyori, Mabhuku, Nhema nhema
Kufira muna november ndiyo yekupedzisira novel ya Guillermo Galvan. Mumusika kubvira zuva rekupedzisira 13, ndiyo nyaya yechitatu iyo nyeredzi detective Carlos lombardi, mushure Kucheka nguva y Mhandara ya mapfupa. Uye zvechokwadi pachava nezvimwe nekuti Galván yakawana a formula yakanaka uko kunobatanidza chiitiko chinonakidza, kurongeka kwakanakisa uye mavara akasimba. Izvi ndezvangu ongorora.
2 Kufira muna november
3 Lombardi uye mushure mehondo Madrid
Valencian munyori uye mutori wenhau nebasa refu rekunyora uye kucherechedzwa nevatsoropodzi nevaverengi, ane mazita ake echikwereti akasiyana se Butterfly Shadows: Epic yaLeovigildo, Mambo weVisigoths, Ndisati ndaonekana newe, Kubva pamadota, Iko kutarisa kwaSaturn, Mhepo inosiya pasina kana o Ndishevedzei Judhasi. Muna 2019 akatanga izvo zvave kutevedzana zvinyorwa zvitatu zvine aimbova mupurisa uye mutikitivha Carlos Lombardi, izvo zvakamuunzira kubudirira kukuru.
Ndakasvika pa Guillermo Galvan Kutenda kushamwari, iyo yakandipa muyenzaniso we Mhandara ya mapfupa. Asi sezvo ini ndichiwanzo kutanga dzakateedzana pakutanga, ndakabatisisa Kucheka nguva. Mhedzisiro: iyo Ndakabatikana paMadrid iyoyo kubva kumavambo 40s zvinonyatso tsanangurwa kuburikidza neakanyatso tsanangurwa mavara, makuru uye echipiri, mune yakanaka kwazvo kuronga zvakare.
Zvino, nefashoni yekunyora zvese, iyi subgenre inonzi hudzvinyiriri Noirndiko kuti, zvinyorwa zvine chirongwa chemapurisa chakaiswa muNazi Germany (saBernie Gunther's, Firipi Kerr), Soviet Union (Arkady Renko, we Martin Cruz-Smith) kana kuti, muchiitiko cheGalván, Spain yaFranco munguva yapashure pehondo.
En Mhandara ya mapfupa Galván akatamisa chiitiko kudhorobha, kunyanya Aranda de Duero, achigadzira imwe label yerudzi, iyo yekumaruwa noir. Uye akaramba achichengetedza bhawa risingadzikisire munyaya itsva iyi.
Kufira muna november
Isu tiri mu Madrid kubva ku42, Yakazara neWWII muEurope uye isingawanzo, yakasviba uye inoshaya mushure mehondo nharaunda pano. Uye Carlos lombardi, aimbova mupurisa uye iye zvino ari kushanda kuHermes detective agency, anobatanidzwa mukuferefeta nyaya mbiri dzisina hukama huri pachena: iyo ye kunyangarika kwemugari weGermany uye kuwanikwa kwechitunha che musikana akanyura.
Panguva imwecheteyo, isu tinoziva zvakawanda nezve yako nhoroondo yomunhu, ane mavambo apo aimbova mudzimai wake Begoña anoita seanojekesa mamiriro ezvinhu avanozviwana vamene. Ivo vachiri vachiri kunze uko inoshanda uye yakavimbika timu yevashandi pamwe nemukuru wavo uye shamwari Balbino Ulloa.
Uye mune iyo Madrid yeiyo grey kupfuura mwenje hapana kushaikwa kubva ku Gestapola AbwehrBritish intelligence agents uye kunyange avo ve Pinkerton U.S. Joins mumwe muzvinabhizimisi kubva kunzvimbo dzakakwirira zvikuru, uye mutsigiri weLombardi, uyo acharatidza mamwe mashoko emunhu seakakodzera sezvo ari kukanganisa kune mutikitivha. Uye ese anopindirana muchirongwa chaanosanganisa chipfambi, cinema, musika mutema uye espionage, asi mhedziso yake ishoma.
Lombardi uye mushure mehondo Madrid
Nekuti mamwe ndiwo anorema anomira pachena mubhuku rino. Lombardy, nekuda kwayo kumashure kwazara kwazvo hasha nekuzvidzora panguva imwe chete pamberi pemamiriro enyika uye hupenyu mune inopfuura grey yeMadrid yakatambudzwa nemigumisiro mushure mehondo yevagari vemo.
Akaora mwoyo asi achipona nepaanogona napo kuenzana kwakaoma pakati peyakare yake mushure menguva yake mutirongo uye nehusiku hunoratidzika kuvhurika pakupera kweruzivo. Uye ndivo maziso ake anotiratidza iyo Madrid, mune yakanakisa mamiriro iyo Galván anodzokorora, zvakatonyanya kujeka nekuda kwerondedzero iripo iyo inogara ichiunza chiito nemifananidzo pedyo. Kukodzera kunopfuura kunyangwe isu isu vasinganzwiri tsitsi nazvo nhoroondo iripo anotiputira ne kubata kwakanaka zvemutaurowo.
Una solvent nhoroondo izvo zvinosanganisa zvine hungwaru mapurisa, nhoroondo uye espionage mhando. Uye zvechokwadi kuchava nezvimwe.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Nhema nhema » Kufa munaNovember, naGuillermo Galván. Ongorora